Fetibe 4 hankafizana mozika mivantana | Bezzia
Maria vazquez | 15/07/2021 12:00 | kolontsaina, Events
Na dia nampiato ny ankamaroan'ny festival tamin'ny taona faharoa nisesy, mozika indray no ho mpiorina voalohany an'ireo izay mahafeno ny fepetra rehetra takian'ny toe-java-misy ankehitriny. Tsy dia betsaka, tsia, fa manana afisy lehibe izy ireo.
Ny ankamaroan'ireo festival ireo dia natao tao Madrid, Vilagarcía de Arousa ary Murcia efa nanomboka. Na izany aza, mbola betsaka ny andro hankafizana ny toe-java-misy manana tombontsoa sy ireo mpanakanto marobe izay hiakatra amin'ny dingana avoakany. Jereo izy ireo!
1 Alina botanika
4 Ny alin'ny Malecon
Alina botanika dia nanangana ny tenany ho fotoana manokana sy ilaina ho an'ireo tia ny mozika manara-penitra ao an-tanànan'i Madrid. Tamin'ny taona 2021, ho an'ny taona fahadimy nifandimby, ny Real Jardín Botánico de Alfonso XIII de la Complutense dia nampiantrano ireo andiana kaonseritra natokana ho an'ny tolakandro sy tolakandro ary ny alina fahavaratra.
Ny habaka voajanahary dia manome tontolo tsy manam-paharoa sy manokana hankafizan'ny filaharana izay mifangaro ny taranaka sy ny fomba toa ny jazz, indie, elektronika, mozika klasika, rock sy pop. Misokatra amin'ny 19:00 hariva isan'andro ny varavaran'ny toeram-pivoriana, izay ahafahanao mankafy ny ora alohan'ny fampisehoana ao amin'ny faritra fialamboly midadasika. Miala amin'ny hafanana eo amin'ireo hazo izy ary mankafy tolotra gastronomika isan-karazany nefa tsy miala ao amin'ilay toerana, dia toa manintona azy io.
Ilay festival izay nanomboka tamin'ny 11 Jona dia mbola misy alina vitsivitsy mialoha. Billy Cobham Band / Richard Bona, Jorge Drexler, Viva Sweden, Andrés Suárez / Isma Romero, Rulo y La Contrabanda, Rosario, Ana Torroja, Los Secretos / El Twanguero, José González ary Niña Pastori, no mpanakanto hiakatra an-tsehatra amin'ny andro ho avy.
Ao amin'ny Atlantic Fest dia misy kintana marobe nefa tsy isalasalana fa ny masoandro mody tsara tarehy azo jerena avy amin'i Praia da Concha na avy any Carril, miaraka amin'i Cortegada any aoriana, ataovy izy io Fetibe tsy manam-paharoa eo afovoan'i Rías Baixas. Vilagarcía de Arousa, tanàna mahafinaritra misy ny Atlantika Fest, dia manome toerana tsy manam-paharoa hankalazana ny mozika, ny natiora ary ny gastronomie ao amin'io faritra io.
Amin'ity taona ity dia atao ny 12 ka hatramin'ny 24 Jolay ny Fetibe; Noho izany, mbola misy andro fifaliana vitsivitsy ho avy. Amidy ny tapakila ao amin'ny tranokala fankalazana tsirairay ho an'ny mpanakanto tsirairay mandra-pahatongan'ny fahaiza-manao feno. Fahafahana voafetra tokoa noho ny kaonty Covid 19.
Push Play Festival dia hevi-baovao iray momba ny hetsika izay mampifangaro tontolo iainana manokana miaraka amin'ny fomba fijery mahavariana momba ny lanitra Madrid, mihoatra ny 20 mpanakanto avo lenta, ny tolotra fikarakarana tsara indrindra sy ny antoka fiarovana tsara indrindra. Hetsika izay amin'ny fotoan-tsasatra izay manahirana tokoa ny fety dia hamerina antsika ny fahafinaretana mankafy mozika eny ivelany.
The Hippodrome of MadridNy firavaka arafitrano iray dia nanambara ny fananana tombotsoan'ny kolontsaina tamin'ny taona 2009, tamin'ity taona ity no sambany mandray ny tolotra pop, rock, flamenco ary jazz tsara indrindra amin'ny sehatra ankehitriny. Manomboka amin'ny 16 Jolay ka hatramin'ny 30 septambra 2021 Push Play dia hahafahanao mankafy 8 kilometatra monja avy eo afovoan'i Madrid, trano fisakafoanana malalaka sy faritra misy pisotroana, faritra sy boaty misy premium mba hanovana ny andro tsirairay ho lasa traikefa hafa tsy hadino.
Ny alin'ny Malecon
Ny alin'ny Malecón mankalaza ny andiany fahatelo ao Murcia. Ny festival izay natomboka tamin'ny faran'ny volana Mey dia hitohy mandritra ny volana Jona sy Jolay, ary lasa iray amin'ireo tsingerin-tsarimihetsika lava indrindra natao tany amin'ny Faritra Murcia.
Ny mozika no mpiorina voalohany amin'ny programa iray izay hametraka ny tanàna ho anisan'ny tolo-kevitra kolontsaina manan-danja indrindra any Espana mandritra ny fahavaratra, miaraka amina mpanakanto malaza indrindra eo amin'ny sehatry ny firenena. Hisongadina ihany koa ny afisy alina mampihomehy miaraka amin'ireo hatsikana sasany izay mampihomehy ny besinimaro ankehitriny indrindra eto amintsika.
Ny tsingerin'ny kaonseritra dia misy amin'ity fanontana vaovao ity miaraka amin'ny fahaizana mihena sy voafetra mamorona a tontolo iainana akaiky sy akaiky ary azo antoka eo amin'ny mpanakanto sy ny vahoaka. Ny hetsika dia natao tao Murcia Río, zana-tongotra mpandehandeha an-tanety manamorona ny renirano Segura miaraka amina portico fidirana lehibe, izay tsy mahita an'i Segura ary manome fomba fijery mivantana ny renirano misy jiro, faritra maintso, faritra iainana, fijerena plaza ary bisikileta. lalana.
Iza amin'ireo fety ireo no tianao hanatrehana? Manana tapakila ho an'ny iray amin'izy ireo ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » Events » Fetibe 4 hankafizana mozika mivantana
Vintage vs Retro: fantatrao ve ny fahasamihafan'izy ireo amin'ny haingo?